Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S amin'ny Android 2.3.6 JVU | Androidsis
Francisco Ruiz | | android-root, Rom, Samsung
Ny fampianarana izay asehonay etsy ambany, toy ny manavao ny Samsung Galaxy S ny alalan ' Odin amin'ny firmware 2.3.6 sy ny mifanitsy aminy Root, dia hanompo, ankoatry ny zavatra hafa, ny fametrahana ny Fanarenana ClockWorkmod ao amintsika GT-I9000, afaka mametaka any aoriana Rom novaina ary nohatsaraina ho an'ny terminal.
Ny zavatra voalohany tokony hojerentsika dia ny an'ny Samsung Galaxy S manana fidirana amin'ny maody DownloadMba hanaovana izany sy amin'ny faran'ny terminal dia hodiovintsika amin'ny alàlan'ny bokotra manaraka, Vol minus + bokotra trano + bokotra herinaratra, hanery azy ireo miaraka amin'izay isika ary tsy hamoaka azy ireo mandra-pisehoan'ny efijery toy izao:
Raha izany dia ho vonona hametraka ny firmware izahay JVU amin'ny Android 2.3.6 mampiasa fitaovana izay ho lasa fototra sy tena ilaina ho antsika Android, ny fitaovana tsy misy hafa fa Odin for Windows.
Para fivoahana Fomba fampidinana ny sisa ataonao dia ny mitazona ny bokotra herinaratra mandritra ny folo segondras, na raha tsy mahomby izany dia esory ny bateria mandritra ny dimy segondra ary avereno ao.
1 Miomana amin'ny fametrahana
2 Fomba fametrahana firmware
3 Fomba fametrahana CF Root
Tadidio fa amin'ny fanarahana ireo dingana amin'ity fampianarana ity Tsy maintsy mandray andraikitra feno amin'ny mety hitranga amin'ny fitaovanao ianao, Raha mifikitra amin'ny torolàlana eto ianao dia tsy tokony hisy zava-dratsy hitranga, fa ny mieritreritra fa isaky ny miditra amin'ny rafitra anatiny an'ny Galaxy isika dia misy ny risika raha tsy manao zavatra araka ny voalaza isika.
Alohan'ny hanombohana ity fampianarana ity tsy maintsy manana ny batterie ianao manomboka amin'ny terminal anao mankany In-100.
Tsy maintsy manana ny mpamily napetraka tsara ao amin'ny PC, raha nametraka Kies ianao ary vitanao ny mampifandray ny terminal anao amin'ny fotoana sasany, efa manana ny mpamily ilaina apetraka ianao, raha tsy izany dia mandehana mankamin'ny tranonkala ofisialin'ny Samsung ary ampidino ny kinova ofisialy farany an'ity programa ity ary apetaho ary ampifanaraho ny fitaovanao.
Ny zavatra voalohany hataontsika raha vantany vao nanamarina izahay fa afaka miditra amin'ilay maody Download, hampidina ireo fisie ilaina rehetra hanatanterahana an'ity tutorial ity am-pahombiazana, noho izany ampiraisinay ireo rohy amin'ireo programa roa ireo Odin ho an'ny Windows fa ho azy Firmware JVU ofisialy sy ny mifanitsy aminy CF Root.
Dia avelako ho anao ny rohin'ny a tsy maintsy manana rakitra antsoina hoe Pit 512, izay ilaina amin'ny Flash mampiasa Odin ny Vondron-kintana, matetika dia ao anatin'ny takelaka an'ny mikirao praogramanao na CF Root, saingy rehefa nahita ny tenako tamin'ilay tsy nampoiziko tsy mahafinaritra noho ny tsy fisian'ity rakitra tena ilaina ity dia ampiarahiko tsirairay mba hahafahanao mitahiry izany.
Vantany vao alaina ny rakitra rehetra, Hosipitsika isika rehetra eo amin'ny toeran'ny Pc izay tena tianay indrindra dia manoro hevitra anao aho hamorona iray fampirimana vaovao amin'ny birao ary esory izy rehetra ao anatiny, afa-tsy ny fisie farany, satria tsy voafintina.
Amin'ity dingana ity dia handeha amin'ny menio an'ny Galaxy S izahay ary hampihetsika ny Famafana USB, izay amin'ireto lalana manaraka ireto: Menu / setting / Applications / fampandrosoana.
Raha vantany vao vita izany rehetra izany dia afaka manavao amin'ny alalany isika Odin ny Galaxy S amin'ny kinova 2.3.6 ary apetraho ny mifanaraka aminy CF Root.
Voalohany indrindra dia hojerentsika izany Kies mihidy tanteraka, noho izany dia hanokatra ny Windows manager manager ary hofaranantsika ny dingana rehetra mifandraika amin'izany Kies, amin'ny fijerena fotsiny ny anaran'ny fizotran'ny fisokafana rehetra, raha misy ny teny Kies any amin'izay hanakatonanay azy koa.
Ankehitriny isika dia hitantana ny programa Odin ary hasehony amintsika ny varavarankely toy izao:
Hametraka ny rakitra Pit izay ampidinintsika farany amin'ny bokotra mitovy anarana amin'izany, noho izany dia tsindrio ny PIT ary hizaha ny lalana izay itehirizantsika azy teo aloha.
Ao amin'ny bokotra PDA dia hapetrakao ny rakitra Code an'ny firmware tsy misy zip
Ao amin'ny bokotra PHONE no hametrahana ny fisie MODEM
Ao amin'ny bokotra CSC dia hisafidy ny rakitra antsoina hoe CSC isika
Hodinihinay ireo boaty karazana Lisitra fanamarinana voamarika eo ankavia ireo safidy Re-fisarahana, Auto reboot y F. Fotoana famerenana.
Rehefa voamarina ny zava-drehetra, hovonoinay tanteraka ny Galaxy, ary hivadikay amin'ny alàlan'ny bokotra voalaza etsy ambony ao io Fomba fampidinana, hampifandraisintsika amin'ny PC izy io ary hizaha ny efijery Odin fa nahalala azy tsara izany, noho izany dia hampiseho amintsika ny teny COM arahin'isa maromaro eo ankavia ambony ihany.
Izao dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra Start ary aza mikasika na inona na inona mandra-pahatapitry ny fizotrany ary eo amin'ny ilany havia ambony dia mitatitra ny teny izy Pass, Mandeha tsy ilazana ny hoe tsy tokony hanao izany isika, mandritra io dingana io esory ny telefaona na inona na inona toe-javatra, ary koa ny fisorohana ny solosainantsika tsy hiditra na fampiatoana, na koa hibernación Tsy misy toa izany.
Mety haharitra vitsivitsy ny fizotrany dimy minitra eo ho eo. Mandra-pahitantsika ilay teny Pass tsy mikasika na inona na inona, raha vao omeny isika Pass azontsika atao izao ny manapaka ny telefaona amin'ny solosaina ary miandry azy io hiverina.
Miaraka amin'ny dingana teo aloha dia hanana ny fanavaozana ny Galaxy tsara ianao ary miasa tanteraka amin'ilay kinova Android 2.3.6Amin'ity dingana manaraka ity dia hanokana azy amin'ny alàlan'ny fitaovana iray ihany izahay hametrahana a Kobelina manokana miaraka amin'ny Root ary ny Fanarenana ClockWorkmod napetraka.
Hanokatra an'i Odin indray izahay, raha efa nosokafantsika teo aloha io, hanidy azy io izahay ary hanokatra azy io indray, amin'ity indray mitoraka ity dia apetraka ao anaty fampirimana ilay rakitra CF Root, ao amin'ny fizarana PDA Odin, ary tsy hifantina rakitra intsony izahay.
Hizaha izany Re-Partition tsy voamarina amin'ity indray mitoraka ity, ny safidy roa hafa dia tokony hofidina, ka tsy isalasalana fa mampiditra pikantsary momba ny tokony endrik'izy rehetra amin'ity indray mitoraka ity aho:
Vantany vao voamarina fa ny zava-drehetra dia toy ny amin'ilay sary niraikitra, hamono ny Galaxy izahay ary averinay io Fomba fampidinana, raha vantany vao navadika isika dia hampifandray azy amin'ny PC ary homentsika ny safidy Start avy amin'ny varavarankelin'i Odin.
Amin'ity indray mitoraka ity dia handray ny dingana latsaky ny iray minitra, raha vantany vao averin'i Odin amintsika ilay teny Pass, azontsika atao ny mampifandray ny findaintsika amin'ny solosaina ary miandry azy io hiverina.
Hanana izany isika mihodina ny, ny Fanarenana voaova ary havaozina amin'ny kinova Android 2.3.6.
Araho hatrany ireo famoahana vaovao satria hanolotra anao ny Romana tsara indrindra ho an'ny fitaovantsika aho, samy izy ireo Gingerbread toy ny vao haingana indrindra Sandwich gilasy amin'ny Android 4.0.
Fanazavana fanampiny - Samsung dia tsy hanavao ny Galaxy S amin'ny fonosana sarobidy
Ampidino - Kies, Odin, mikirao praogramanao, CFRoot, Lavaka 512.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S, havaozina amin'ny alàlan'ny odin mankany amin'ny firmware 2.3.6 sy ny CF Root
351 hevitra, avelao ny anao
Miasa amin'ny 9003 ity? fiarahabana
Tsy mandeha izy io, ny terminal dia samy manana ny tranokalany avy
marlis dia hoy izy:
Ahoana no hataoko raha apetrakao ao anaty odin ny findaiko ary tsy hitranga ny tsipika maitso…. c ah nijanona ho toy ny marika ihany, inona no hataoko amin'izany 🙁
Mamaly an'i Marlis
albant77 dia hoy izy:
Hitako fa efa taona maro ilay lahatsoratra ary tsy haiko raha mahita ity hafatra ity ianao.
Ity no fotoana voalohany nahitako fanazavana mifanaraka amin'ny fomba fanarenana i9000.
Raha ny fanazavana dia nanomboka ny olako rehefa lany ny serivisy nataoko. Hay nivadika ho 00499 ny IMEI… ..
Tonga izany rehetra izany satria manandrana mihodina aho (superuser) ary tsy avelany. Raha manana torohevitra ianao dia tena tiako izany.
Ny mailaka: aantunez@tsj-dem.gob.ve.
Valio i albant77
thomasdinamarcav dia hoy izy:
Nataoko tamin'ny telefaonako izany ary maty izy 9003,
Ahoana no hamelomako azy io?
Valiny tamin'i Thomasdinamarcav
Hanombohana ity fampianarana ity dia ho an'ny Galaxy S, na GT-i9000, rehefa nanomboka nanaparitaka ny gt-i9003 ianao. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manamarina raha mitombina amin'ny maodelinao.
Hamarino raha mbola manana fidirana amin'ny maody fampidinana ianao, raha mbola azonao atao ny mamerina mamaky azy io amin'ny firmware marina.
Ismael Morano dia hoy izy:
Tsy afaka manome fiainana ny findaiko aho, mitovy amiko sy ny ankamaroanao izany. Vonoina ny telefaona ary tsy afaka hamerina azy intsony aho, na amin'ny fomba fampidinana aza! Manantena aho fa hisy hanome vahaolana ahy! 🙁
Valiny tamin'i Ismael Moraño
Tronium01 dia hoy izy:
tapaka ny rohy mankany amin'ny faka CF ... misy safidy hafa ve?
Mamaly an'i Tronio01
terrymcguinis dia hoy izy:
ronono! Fa maninona no nofafanao ny fanavaozana ny lahatsoratra ICS?
tsy misy joaquin, tsy tsara amin'ny 9003
Valiny tamin'i Terrymcguinis
Axotla dia hoy izy:
Tsy mety intsony ny rohy fisie CF, azonao atao ve ny mamerina azy?
Mamaly an'i Axotla
Efa nakarina indray
elchui dia hoy izy:
Misy mahalala ve hoe maninona no mitaky fotoana lava, ievo toy ny 20 min dia mbola namolavola ny SBL amin'ny faritra havia ambony aho ary eo amin'ny baran'ny galaksiako dia misy isan-jato kely monja mandeha, misy mahalala ve ny antony ?? ny ataoko? Misaotra betsaka anao aho.
Mamaly an'i elchui
Ahoana no nahavitako ilay zavatra namako, nanomboka tsara ve ianao?
Procrastus dia hoy izy:
tsy misy intsony ny rakitra CF
Afaka mampakatra azy indray ve ianao?
Mamaly an'i Procrasto
D69 dia hoy izy:
Valiny amin'ny D69
Sanchez 992 dia hoy izy:
Milaza amiko izy fa mandalo, fa rehefa manomboka dia hita eo amin'ny efijery ON SCREEN KEYBORD SETTINGS fa ny efijery toa tsy mandeha noho ny tsindry ary tsy manome valiny, inona no hataoko?
Valiny tamin'i Sanchez 992
Inona no maodelin'ny telefaona anananao compi?
Vampira54 dia hoy izy:
tena tsara daholo, fanazavana tonga lafatra.
Valiny amin'i Vampire54
csramostoro dia hoy izy:
tonga lafatra ny zava-drehetra ary tao anatin'ny fotoana fohy dia misaotra betsaka.
Mamaly an'i Csramostoro
Misaotra !!! niasa tonga lafatra ny zava-drehetra ... ny hany tsy fantatro ny antony, fa ny 3G tsy mandeha amiko ... tsy fantatro raha noho ny fanavaozana na noho ny fisian-javatra diso ny fanamboarana ... tiako mankasitraka izay sosokevitra rehetra! SAlu2
Raha sanatria ka mety aminao io.
Tsy niasa ho ahy koa ny 3G ary ny nataoko dia niantso ny orinasako (Euskaltel) ary tamin'ny alàlan'ny telefaona dia namboarinay ny faritra »Mobile Networks - Access point names - Mamorona teboka fidirana vaovao» ary avy teo aho nameno ny angona What Nilaza tamiko izy ireo fa miasa ho ahy izao ny 3G.
Michelangelo25 dia hoy izy:
Nanana olana izay toa matotra be aho. : S
Tsy nahomby ny fametrahana ny RO ROOT ary tsy manomboka ahy izao. Hitako ny kisary finday mifandray amin'ny PC misy fambara loza (telozoro mavo misy marika fiantsoana) eo amin'izy ireo. Miezaka ny mamono azy aho, miditra amin'ny maody fampidinana ... saingy tsy misy fomba. Nesoriko ihany koa ny batery fa rehefa averiko dia miseho indray ilay sary masina mahafaly. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Miguelangel25
Nahavita niala tamin'ny biriky semi-niditra aho. Nesoriko ny bateria sy ny SIM nandritra ny antsasak'adiny. Averiko ao anaty indray ilay bateria (fa tsy ny SIM) ary nanandrana niditra tao amin'ny mode Download aho. Niasa ho ahy izany. Avy eo dia namerina nametraka ny firmware 2.3.6 tamin'i Odin aho ary tafatsangana ny telefaona. Tsy fantatro izay mety ho hadisoako saingy taorian'ilay fampitahorana dia mieritreritra aho fa tsy hametraka ny RO ROOT CF 🙂
Ho an'ireo izay miseho ny biriky semi-biriky misy ny sarin'ny telozoro sy ny solosaina, na ireo izay manana olana amin'ny fizotran'ny sbl, fa tsy mandroso intsony ny fametrahana ao odin, eto dia avelako fampianarana tena tsara ianao http://www.carvax.com.mx/2012/01/26/reparar-galaxy-s-i9000t-de-semibrick/
fiarovana dia hoy izy:
Ary raha tsy afaka miditra amin'ny maody Download isika?
Mamaly an'i Amparo
mmh141 dia hoy izy:
Salama jereo, nataoko daholo ny manaraka ny dingana rehetra mandra-pahatonga ny efijery ho maizina tao amin'ny maody fampidinana rehefa vita ny odin, ary notapahiko ilay izy. ankehitriny dia tsy mandeha izy io, tsy manome vola na mampiseho mariky ny fiainana. Azo alamina ve izany?
Nomena anao ve ny Odin?
stifleeer dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko: fantatro izay nataonao ???
Mamaly an'i stifleeer
jr_songs dia hoy izy:
Toy izany koa no nanjo ahy rehefa nanamboatra azy ianao
Mamaly an'i Jr_cantos
yesicazz dia hoy izy:
mba hanohizany ny fiainana dia tsy maintsy manaraka ny torolalana ianao, fa rehefa mamoaka ny bateria dia alefaso miaraka amin'ny fitambarana lakile ary hiseho avy eo ny fisintomana. tohizanao ihany ny fametrahana ny ambiny—– tsy maty !! ! amin'ny koma fotsiny hehehej yeelzu_22hot
Mamaly an'i yesicazz
bonilla18luis dia hoy izy:
Nanavao azy aho fa izao tsy fantatry ny tamba-jotra aho, afaka miantso aho fa tsy afaka mampiasa Internet ary tsy afaka manamboatra mailaka mihitsy aho? inona no tokony hataoko?
Mamaly an'i bonilla18luis
Ampidiro ny fifandraisana tsy misy tariby ary ampifanaraho ny angona APN, miantso ny mpandraharahao fa hanome azy ireo izy ireo.
hellmasterlinux dia hoy izy:
namana inona ny teny miafina firmware ??? del pda, telefaona ary csc hamaha ny rakitra rar
Mamaly an'i Hellmasterlinux
samfirmware.com, mametraka azy ao amin'ny paositra
Albixi101 dia hoy izy:
Inona no nataonao mba hamahana azy io? Raha izany dia manana vahaolana ve izany?
Valiny amin'i Albixi101
amboary APN avy amin'ny fikirakirana tambajotra finday
elfabigb dia hoy izy:
Valiny tamin'i Elfabigb
Inona no nataonao? Toy izany koa no nanjo ahy omaly ...
jvillagran dia hoy izy:
ny olana dia tsy mitovy amin'ny maodin'ity lahatsoratra ity ny maodelin'ny solo-sainao, mitovy amiko ny zava-nitranga, tsy mazava ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, azonao atao ireo lesoka ireo, galaxy S gt- ny solosainko i9003, ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny maodely gt-i9000. Miala tsiny aminao milaza aminao fa nanamboatra ny findainao izy ireo ary nanamboatra azy ireo dia mila mampiasa faritra manokana mifandray amin'ny tariby USB finday ianao. Raha nividy ny finday aho vao tsy ela akory izay dia mbola manana garantie izany, ka nentiko tany amin'ny serivisy ara-teknika ary rehefa hitan'izy ireo fa hadisoana fohy eo amin'ny lozam-pifamoivoizana io dia novain'izy ireo vaovao.
Valiny tamin'i Jvillagran
lil_smoke dia hoy izy:
Salama, efa manana ny finday vaovao aho ary mandeha tsara ny zava-drehetra, saingy rehefa te-hisintona ny CF Root aho, dia toa nifangaro tamina programa hafa izy io, ok, ampidiniko io programa io, napetrako daholo fa ny CF Root tsy aiza, afaka manampy ahy ve ianao .. ..
Mamaly an'i Lil_smoke
Bitxobola dia hoy izy:
Nandeha tamin'ny super beginner ka hatramin'ny mpampiasa super aho tao anatin'ny indray mipy maso! Saingy manana olana mitovy amin'ny bonilla18luis aho, ary na eo aza ny fivezivezena dia mandeha tsy hifandray amin'ny tamba-jotra, ary amin'ny tambajotra finday dia mifandray amin'ny tambajotra misy ahy (Boda fone) ary mbola mijanona ihany ... Jereo ihany koa ny manodidina ny APN config. (http://www.vodafoneteayuda.es/2011/12/habilita-la-conexion-a-internet-en-tu-terminal-con-android/) Tsy azoko atao koa ... afaka manampy kely aho!
Fiarahabana avy amin'ny Raval ary misaotra betsaka !!!
Mamaly an'i Bitxobola
Ao amin'ny BLOG ianao dia manana Post momba ny fanamboarana ny apn
Tamin'ny 06/11/2012 04:35 PM, «Disqus» nanoratra:
Paola Dominguez dia hoy izy:
Tsy manana an'io safidy io aho !!! ny ataoko
Valiny tamin'i Paola Dominguez
Ampidiro ny setting / Wireless sy tambajotra / Tambajotra finday / Apn ary mamorona APN vaovao miaraka amin'ny angon-drakitra omen'ny orinasanao anao.
Matute dia hoy izy:
Ampio ireo dingana rehetra ary ampodiko io ary mahazo eo amin'ny efijery fitendry ary tsy mamela ahy handroso izany
Valiny tamin'i Matute
TAVISAN dia hoy izy:
ao anatin'ny fampirimana zIMAGE CF ROOT SALE, FA TSY METY HANAO INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA ODIN… AZONAO VOAFITRA INDRINDRA
Valiny amin'i TAVISAN
Izany dia satria esorinao ny zotram-pifandraisana .tar ary tsy mila esorinao ilay izy, dia tsy maintsy ampiasainao ny CFrootxxxxx.tar ao odin.
Toy izany koa no mitranga amiko ary tsy haiko ny manamboatra azy.
Cfroot dia tsy fampirimana, fisie .tar ary io no mila ampiasainao mivantana amin'ny odin.
Tudelaiseguer dia hoy izy:
Valiny tamin'i Tudelaiseguer
Victor Andres Delgado Ramirez dia hoy izy:
Salama, ry namana finaritra alina, fanontaniana napetrako in-3 ity kinova ity ary zavatra hafahafa foana no mitranga amiko, efa saika novakiako daholo ireo fanehoan-kevitra rehetra ary heveriko fa izany no nitranga tamiko ary io no zavatra manaraka rehefa novonoiko ilay fitaovana na hamerenana azy aorian'ny famadihana azy tsy misy feo multimedia, tiako holazaina fa maneno ny lakolosy rehefa misy antso. fampandrenesana Facebook sy zavatra hafa miresaka zavatra tokana izay tsy maneno dia ny volavolan'ny haino aman-jery sy ny haben'ny rafitra, ny fampandrenesana ary ny antso ho avy, miasa tsara ihany koa ary tsy fantatro izay hatao raha fantatrao izay mitranga azafady ampio aho fa mieritreritra aho fa kinova tena tsara satria nametraka ny hafa aho ary ity no tsara indrindra amin'ny hevitro misaotra betsaka anao raha tianao hanampy ahy hanampy ahy amin'ny fb victor860609@hotmail.com misaotra sy arahaba
Valiny tamin'i Victor Andres Delgado Ramirez
tafo dia hoy izy:
Rehefa manomboka indray dia mangataka tenimiafina amiko izy, milaza ny tenimiafiko hanamafy. Inona izany?
Mamaly an'i Tejadong
Ataoko fa io no Sim
darkdragon2711 dia hoy izy:
tena nilamina daholo ny zavatra rehetra !!!!! Ankehitriny ny SGS-ko dia manana ny fanekena ny endrika, ny mpamoaka sary, ny sg2s mamoha ary maka sary sy rakipeo video tuto tsara izao dia handeha aho amin'ilay lahatsoratra fanavaozana izay vao nampakarinao !!!! Miarahaba anao !!!!
americao dia hoy izy:
Salama!! Manana olana kely aho amin'izany rehetra izany, ary tsy fantatro raha mametraka ahy amin'ny fomba fampidinana izy io, satria manao combo an'ireo bokotra telo aho ary mahazo menio tsy misy safidy fampidinana ary tsy mahazo ny android amin'ny angady, eny fa na dia ka apetrako ao amin'ny odin izany dia hitany amiko, apetrako amin'ny toerany ny zava-drehetra omeko azy ary manomboka mandeha ny zava-drehetra fa mitoetra ao anaty setupconnection .. mba hahafahanao mametaka ora. Inona no azoko atao, misaotra betsaka !!! Avelako ho anao ny mailako iavp79@hotmail.com. mamerina ny fisaorana anao
Mamaly an'i americo
Ny zavatra mitovy amiko ihany no mitranga amiko, tratra tao amin'ny SetupConnection izy io ary tsy handeha ...
Mamaly ny tenako aho raha sanatria mety ho an'olona io. Ny teny miafina no ampiasainao hamaha ny efijery (fa tsy ny tambajotra finday)
Miorim-paka ve ny terminal?
Nietodan dia hoy izy:
Mikasika io olana io dia manana terminal miodina aho ary mijanona eo amin'ny setupconection, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Nietodan
Seriva_126 dia hoy izy:
Salama, nanao ny dingana voalohany aho ary nanjombona ny efijery ary toa tokony hiverina indray izy io, inona no hataoko izao?
Mamaly an'i Seriva_126
namana inona no nataonao Toy izany koa no nitranga tamiko
cell_dead dia hoy izy:
Toy izany koa no nanjo ahy….
Mamaly an'i celu_muerto
jair alfonso ramirez dia hoy izy:
nahavita nanamboatra an'io ve izy ireo?
Mamaly an'i jair alfonso ramirez
ny olana dia tsy mitovy amin'ny maodin'ity lahatsoratra ity ny maodelin'ny fitaovanao, mitovy amiko ny zava-nitranga, tsy mazava ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, azonao atao ireo lesoka ireo, galaxy S gt- ny solosainko i9003, ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny maodely gt-i9000. Miala tsiny aminao milaza aminao fa nanamboatra ny findainao izy ireo ary nanamboatra azy ireo dia mila mampiasa faritra manokana mifandray amin'ny tariby USB finday ianao. Raha nividy ny telefaona finday aho tato ho ato, dia mbola manana garantie izany, ka nentiko tany amin'ny sampan-draharaha teknika ary rehefa hitan'izy ireo fa hadisoana fohy lozika io dia novain'izy ireo vaovao.
Lluis Aguila Fosch dia hoy izy:
Valiny tamin'i Lluís Aguilà Fosch
Ocons2009 dia hoy izy:
Amin'ny Samsung Galaxy S Captative i897 dia azo atao ve ity fomba ity? Io no namakiako ny GT-I9000 etsy ambony ary satria vaovao aho amin'ity dia tsy manana hevitra momba ny telefaona Andriod aho. Azoko atao ve ny milaza amiko raha manana firmware 2.3.5 aho, afaka mampakatra amin'ny 2.3.6 miaraka amin'ity fomba ity?
Valiny tamin'ny Ocons2009
tsy azonao atao, fitaovana samihafa izy ireo.
Tsy izany dia ho an'ny GT-i9000 ihany
Gustav1998_ dia hoy izy:
fanontaniana rehefa miverina faka dia ho voafafa daholo ve ny data sy ny rindranasa rehetra?
Toy ny maro izay nandefa etsy ambany, amiko taorian'ny nivoahan'ny PASS tamin'ny fanavaozana ny android, nikatona izy io ary avy eo tsy nirehitra na nanome famantarana na inona na inona, nesoriko ny bateria, nanandrana nanarina aho ary niaraka tamin'ny fampidinana ary. tsy manome signal! Inona no azoko atao: S
crisrm dia hoy izy:
Manana Samsung Galaxy S aho fa ilay kinova manana Digital TV Tuner. Raha mampihatra an'io fomba io aho, hanohy hanana fidirana amin'ny fahitalavitra ve aho? Misaotra anao!
Tsy mino aho, ry namako, izay rehetra tsy fanavaozana ofisialy, tsy mino aho fa mitondra izany fampiharana izany, tsy fantatro akory izany.
Na izany na tsy izany misaotra anao mamaly ahy.
Joseph A. Peters dia hoy izy:
Ho an'ireo izay manana biriky semi dia tsy maintsy ataonao ny dingana rehetra amin'ny fametrahana firmware ary avy eo amin'ny farany dia ampidiro ny fikirakirana finday ary apetraho indray ny deboka usb raha tsy izany dia tsy hanaiky azy ireo amin'ny odin ny faka faka.
Valiny tamin'i Jose A. Peters
Gustavolorca dia hoy izy:
Ry malala, manao ny dingana rehetra, rehefa nesoriko ny telefaona finday dia maizina ny efijery ary tsy mamaly…. Nesoriko ny bateria ary tsy mamaly izany na amin'ny fomba fampidinana
Valiny tamin'i Gustavolorca
Avelao izy hiala sasatra kely tsy misy bateria ary hiverina amin'ny fomba fanarenana, ary avereno jerena indray ny zava-drehetra, jereo manokana ny flash voalohany hanamarihana ny fizarana Re, ary amin'ny faharoa, izany hoe ao amin'ny Kernel na CFroot, raha tsy manisy marika azy, averiko ihany fa aza asiana marika ny fizarazarana indray
Stephi veronik dia hoy izy:
salama manana ny mpilalao galaxy aho (ypg70) ary herinandro izao dia tsy milalao multimedia izy io; Tsy milalao mozika izy (nianjera ary nisy lesoka hita teo amin'ilay rindrambaiko), tsy naneno ny fanairana, tsy afaka mandray feo na horonantsary aho, tsy milalao YouTube (misy efijery mainty) na radio. Tsara ny manamarika fa manana 3 herinandro miaraka aminy aho, nomen'izy ireo ahy (raha tsy manana faktiora handefasana izany any amin'ny foibe serivisy / fiantohana) ……… amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny chat miaraka amin'ireo mpiasan'ny samsumg dia averiko indray hahatratra ny ny soatoavin'ny ozinina ary tsy nisy namboarina ny olana …………. afaka manampy ahy ve ianao?????
Valiny tamin'i Stephi Veronik
Miditra amin'ny maody Download ve izy io?
Manomboka amin'ny fikatonan'ny terminal, esory izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Volume miampy ny herinao ao an-trano, ary lazao amiko raha mahita marika mavo miaraka amina Android eo am-pananganana ianao.
MSF dia hoy izy:
Narahiko ny torolàlana hatreny ambanin'ny taratasy ary tsy mandeha ny mikasika…. ampio azafady.
Valiny amin'ny MSF
Inona ny mikasika?
Antonio Duran dia hoy izy:
ny efijery mikasika dia tsy mandeha…. Mahazo tenimiafina fanamafisana aho ary tsy afaka manao n'inona n'inona, vonoiko ary hiverina izy. mba ampio
Valiny tamin'i Antonio Duran
Atsimbadiho indray hatrany am-piandohana ny fandinihana ny dingana rehetra.
Izay lazainao amiko momba ny pasword izay mbola tsy reko tamin'ny fiainako.
Toy izany koa no nitranga tamiko, ahoana no namahanao azy?
Tsy haiko izay tianao holazaina, mamaritra kely kokoa.
Na izany na tsy izany, hiverina indray aho.
Sergio Castillo Yrizales dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko, tsy mandeha ny «écran», na omenao inona na inona omenao azy, tsy mahavaly ny «écran» ... fantatrao ve raha misy ny vahaolana?
Valiny tamin'i Sergio Castillo Yrizales
Malagasy dia hoy izy:
Ilaina ve ny faka?
Mamaly an'i Jaimes
jsd dia hoy izy:
mila faka ve ianao?
Mamaly an'i jsd
Tsy ilaina ny namana
Franck dia hoy izy:
Salama maraina. Navoaka ny s2 ary tsy maimaimpoana amina magazay. Tsy afaka manavao azy io aho ary mila mitondra azy any amin'ny magazay foana. Tsy voampanga aho fa manaintaina ny ampondra. Azoko an-tsaina fa afaka nanao ity programa ity fa ny mariky ny android miasa. fampitandremana fotsiny no hita… .etc.Inona no azoko atao azafady?
Mamaly an'i franck
Azonao atao ny mamaha ny Samsug Galaxy S amin'ny alàlan'ny Galaxy Unlock izay ho hitanao ao amin'ny Play Store.
yamiztc dia hoy izy:
Fanontaniana iray, efa vitako ny zava-drehetra tao amin'ny lesona, mitranga izany:
OSM> MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5 dia mety.
GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJVU.tar.md5 dia mitombina.
Mandeha toy ny 20 min izy ireo ary tsy nihetsika mihitsy, hoy hatrany izy io hoe SET PARTITION ao anaty boaty etsy ambony ary tsy mitondra entana .. tokony hiandry foana ve aho sa inona no ataoko?
PS: Galaxy S 9000 io
Mamaly an'i Yamiztc
bcalvo2006 dia hoy izy:
Izaho manana ilay olana nolazainao ihany
Azonao vahana ve?
Valiny tamin'ny Bcalvo2006
Ny menio fikirakirana / fifandraisana / tamba-jotra finday / apn, raha ao anatin'ity zotra ity dia tsy misy safidy hiseho, tsindrio raha hanampy APN vaovao ary amin'ny safidy voalohany dia apetraho ny Yoigo internet, avy eo amin'ny faharoa dia mametraka Internet ianao, kitiho ny bokotra aoriana ary safidio ny APN vao noforoninay, avereno indray ny Galaxy ary voavaha ny olana. Manantena aho fa manompo anao amin'ny fomba nanandramako ny kinova 4 fa tamin'ny antso niaraka tamin'ny viber dia tsy naheno ahy izy ireo fa miantso ny mahazatra raha toa ka mandeha izany, nanandrana programa hafa koa aho ary tsy misy na inona na inona miarahaba ny kinova 4.
marika dia hoy izy:
Nanao ny zava-drehetra aho tamin'ny naha-mpitaiza ahy, omena ahy i pass, ny sela dia mijanona eo amin'ny efijery mainty, esory ny bateria ary tsy mandeha izy na amin'ny fomba fampidinana, azafady fa kivy aho, 2 herinandro lasa izay no nividianako azy
Valiny tamin'i Marce
Malagasy91 dia hoy izy:
Lehilahy tena lehibe ianao, nataoko araka ny nolazainao izany ary tsy nanana olana aho.
Misaotra betsaka ary miarahaba be dia be.
Valiny tamin'i Malagueño91
Nanaraka ny dianao tamin'ny taratasy aho ary tsy namaly ny efijery ...
aduranmontana dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko, mila fantatro izay tokony hatao, hoy ny telefaoniko hoe tenio ny tenimiafiko… ary tsy mandeha amiko ny mikasika.
Valiny tamin'i Aduranmontana
kurai zafi dia hoy izy:
Mitovy tanteraka ny zava-nitranga tamiko !!!!!! Azonao atao ve ny manamboatra azy io? T____T
Valio i kurai zafi
Toy izany koa no nitranga tamiko .. mbola tsy namboarin'izy ireo ???
John Eduardo Carranza Pacheco dia hoy izy:
ny nanamboaran'izy ireo azy ho helo: '(ny ahy dia vahindanitra samsum S i9000
Valiny tamin'i Jhon Eduardo Carranza Pacheco
DiegoD dia hoy izy:
Fanontaniana, Ahoana no fomba fanaovako ny tamba-jotra data? Ampiasaiko izy io ary tsy hita ... Tsy nila nametraka APN mihitsy aho satria ilay fitaovana ihany no mampifandray ny tambajotra data, ary raha manampy APN aho dia mangataka ahy amin'ny antsipiriany izay tsy misy hevitra, hisy fomba ve Raha ny tokony ho izy, afaka ny selako…
Valiny tamin'i DiegoD
Antsoy ny orinasanao ary mangataha fampahalalana marina, tsy hanome anao olana izany.
Nanao ny zava-drehetra aho ary izao dia tsy mandeha amiko ny mikasika .. (efijery mikasika) rehefa ampodiko io mba hamboarina tsy afaka manao zavatra ataoko aho.
Inona ny maodelin'ny terminal anao '
Lyzeth Linares Sandoval dia hoy izy:
Felipe Nandalo ny trangao fotsiny aho, maty ny écran-ko satria nirehitra izy io nefa tsy nety ny mikasika azy nefa nahagaga fa hitako ity horonantsary ity ary io no vahaolana !!
Valiny tamin'i Lyzeth Linares Sandoval
Sample3_ dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao tokoa.
Omaly alina dia nosakanana teo amin'ny efijery finday ny findaiko, tsy nandoa vola na inona na inona izy io. Tsy niditra tao amin'ny maody fanarenana akory izy io fa tonga tamin'ny fisintomana.
Nanaraka ny dian-tongotrao aho ary misaotra anao fa nitsangana tamin'ny maty ny findaiko.
Mamaly an'i Sampl3_
Juan Carlos Rosales Guevara dia hoy izy:
Salama tiako ho fantatra raha azo ampiharina amin'ny galaxy s GT-I9000t ity rom ity
Valiny tamin'i Juan Carlos Rosales Guevara
Tsy misy namana ity rom ity ho an'ny i9000
Misaotra namana, azonao atao ve ny manolotra rom ho an'ny sela. satria mila manavao aho dia manana vers. froyo 2.1.1.
Mitadiava Team RemICS-UX izay ao amin'ny bilaogy
Ijrap dia hoy izy:
salama namana fantatrao ve hoe aiza no ahazoako roman ICS ho an'ny gt-i9000t anao satria manazava ianao fa tsy ho an'ity fitaovana ity… misaotra!
Mamaly an'i Idjrap
Juan Carlos Rosales placeholder image dia hoy izy:
Salama namana tsara, lazaiko aminao fa nanao risika aho ary nametraka ilay rom na dia nolazainao tamiko fa ho an'ny GT-i9000 fa na izany aza napetrako izy ary miasa ho ahy ny rom amin'ny Gt-i900t ahy, mandeha ara-dalàna izy io.
Valiny tamin'i Juan Carlos Rosales
Faly aho fa mety aminao io, saingy mety ve ny zava-drehetra?
Juan Carlos Rosales (tsy voasoratra ara-panjakana) dia nanoratra, ho valin'ny an'i FranciscoRuizAntequera:
IP adiresy: 186.32.65.141
Size dia hoy izy:
Tsy fantatro izay tsy mety ataoko, fa narahiko ny dingana mankany amin'ilay taratasy ary rehefa manomboka ny fanavaozana ao ODIN dia mihantona ao amin'ny "boot.bin" izany. Ny tsipika fandrosoana manga eo amin'ny terminal-ko dia tsy mihoatra ny tokony ho 2%. Nanandrana indray aho ary tsy miova. Inona no azoko atao mba hamerenako azy io ??
Valiny tamin'i Dimen
Vao nanandrana nametraka azy tamin'ny galaxy S gt-i9003 aho dia maty
Tsy maintsy hampiasa ilay antoka aho ary hiteny hoe tsy nokasihiko mihitsy izany, saingy hey
Efa niainako fa misy rom tsy mandeha na dia galaxy S aza
Ataovy mazava tsara fa ho an'ny GT-i9000 ity, zahao raha manana fidirana amin'ny maody fampidinana ianao ary mbola azonao atao ihany ny mamonjy azy.
Tsy manana fidirana aho, maty tanteraka izy ...
Richardguti_27 dia hoy izy:
Narahin'ny namana ny dingana rehetra ary rehefa mampiasa rindranasa marobe aho ary mankeny amin'ny efijery lehibe dia mijanona ao anaty loop izay manjary mainty ny efijery ary mivoaka indray ny temotra ary mandritra izany dia inona no vahaolana?
Valiny tamin'i Richardguti_27
Silvina Garrido dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana rehetra aho ary rehefa ao amin'ny ODIN dia omeko ny Start dia mampiseho hafatra am-baravarankely (lakroa mena) izay mampiseho ny lalana sy ny rakitra CODE ary bokotra OK. Raha omeko izy hanaiky… dia mijanona izy rehefa mandeha ary ao anaty boaty hafatra ODIN dia asehoy azafady miandry…. Niandry 20 minitra mahery aho ary tsy nisy toa nilaza tamiko fa manodin-javatra ... inona no tokony hataoko ??? Raha tsy manindry ny ACCEPT aho dia tsy manao na inona na inona ...
Na eo aza ny tolo-kevitra izay tsy mikasika n'inon'inona ... rehefa afaka 20 minitra dia nanapa-kevitra ny hanidy ny ODIN aho ary hamono ny finday ... ary ny zavatra rehetra dia mbola nitovy tamin'ny talohan'ny nanombohako azy, ny tiako holazaina dia ny asan'ny findaiko ary izany fa tsy ianao velively jereo fa nanavao ny firmware izy io. Ny findaiko dia Galaxy S I9000
Manantena aho fa afaka manampy ahy… ..
Mamaly an'i silvina garrido
Mametraka ny finday amin'ny maody Download ve ianao?
Navarrogarch Jason71 dia hoy izy:
Salama, tiako ho fantatra raha manana mpamaky feo toa ny iPhone antsoina hoe (VoiceOver) i Samsung, natao ho an'ny olona ambany fahitana ity fampiharana ity. Na tsia satria aleontsika ny samsung ... nc raha toa ka manana anarana hafa ity fampiharana iphone ity, misaotra mialoha amin'ny valinteninao ...
Valio amin'i Navarrogarca Jason71
aaron-nike08 dia hoy izy:
mety amin'ny gt-I9000t
Valiny tamin'i Aaron-nike08
jaimefacs dia hoy izy:
Raha aorian'ny fanavaozana ny 2.3.6 sy famerenana amin'ny laoniny ny rindranasa dia apetraka ny faka faka hoe, Very ve ny angona izay azoko tamin'ny finday?
Mamaly an'i Jaimefacs
Mbola tsy nanao an'io toy izao aho, fa raha ny teôria dia tsy tokony ho very angona na fampiharana ianao
patrizioandrez dia hoy izy:
Vao avy nanao an'io aho. Nanana olana tamin'ny 3g aho, saingy niantso ny orinasako (Movistar, Chile) ary namaha izany. Saingy, ny finday izao dia tsy mahita tambajotra Wi-Fi. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Patrizioandrez
Demon dia hoy izy:
Tonga lafatra ny zava-drehetra, misaotra !!!
Mamaly amin'ny demonia
zirius dia hoy izy:
Salama namana, manana fanontaniana 1 sy olana 1 aho, ny voalohany dia satria 100% ny bateria (satria ny findaiko noho ny antony dia tsy mitaky 100% farafaharatsiny dia mamela ahy 90% izany ary tsy misy) heveriko fa tokony amin'ny batterie na antony.
Ny olana hafa dia ny nanandramako azy hahitana raha nifandray izy io nefa manamarika ahy fa tsy fantany ilay fitaovana ary notadiaviko tany amin'ny seranana maro izany ary tsy nisy (napetrako ireo mpamily kies, efa nampifandraisiko imbetsaka tao Amin'izany fomba izany dia mampihetsika ny debugging aho ary manidy izay rehetra misy ifandraisany amin'ny kies avy amin'ny manager manager ary ataoko amin'ny maody Download)
Mamaly an'i zirius
Mieritreritra aho fa miresaka momba ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000 isika?
Azo antoka ny namako fa ny GT-I900T ary manana firmware 2.3.3 aho miaraka amin'ny GINGERBREAD.UMJV2 izay no antony naniriako hanavao azy saingy mety amiko izany no antony hankanesako any aminao.
Ny GT-I9000T dia tsy ny GT-I9000, ity tutorial ity dia notsapaina sy notsapaina tamin'ny GT-I9000, ka tsy hitako izay holazaiko aminao momba ny terminal anao, ny zavatra tsara indrindra dia ny mijanona sammobile ianao ary misintona izay rehetra anananao mila manazava ny maodelin'ny terminal anao.
Ka noho izany, misaotra ny fotoananao, tiako be izany.
Ao amin'ny odin, ny teny COM arahin'ny isa dia tsy miseho rehefa mampifandray azy amin'ny fomba fampidinana ianao?
Tsia, napetrako izy ary araka ny voalaza fa manamarika ahy io fa tsy mahafantatra ilay fitaovana izy ary tsy mamantatra ny COM mihitsy.
PD.- Hiezaka ny hahita ny zavatra ataoko aho fa raha ny fahitanao azy raha toa ka mahavita mifandray izy dia mieritreritra ve ianao fa tsy olana amin'ny batery nolazaiko io?
Humbertoorellanae dia hoy izy:
ny samsung galaxi ace vale callampa
Valiny tamin'i Humbertoorellanae
Raha mijery ny lohatenin'ity lahatsoratra ity ianao dia ho an'ny Samsung Galaxy S fa tsy an'ny Samsung Galaxy ACE.
Ny findainao dia ho maodely Galaxy S GT-I9000, sa tsy izany?
ayuuuuuuuuuudaaaaaaaaaaaa !! Nametraka an'ity kinovan'ny s galaxy ity aho fa nametraka azy tamin'ny galaxy s maivana ary tsy afaka mametraka ahy amin'ny mode dowload izy satria tsy mitovy io ... mila averiko amin'ny endrika tany am-boalohany misy ny galaxy s izy io .. . Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao 🙂
axelflorido38 dia hoy izy:
tsy nandeha ny finday taorian'ny pass voalohany ... maty io! Inona no ataoko lehilahy!?
Valiny tamin'i Axelflorido38
Nahavita an'io aho tamin'ny i9003 mino fa natao ho an'ny firmware ity, tiako holazaina, amin'ny galaxy scl samsung ary tsy manomboka na miditra amin'ny maody fampidinana izany !!! Inona no azoko atao !? maika, azafady
Toy izany koa no nanjo ahy, tsy mazava ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, azonao atao ireo lesoka ireo, satria nividy finday aho vao tsy ela akory izay, mbola nisy antoka ihany koa, ka nentiko tany amin'ny serivisy teknika ary rehefa hitako fa dia lalan-kely tsy fahombiazan'ny lojika, novain'izy ireo tamin'ny iray vaovao.
un_moko dia hoy izy:
Eny, mampihomehy, mila mamaky ianao, fantatrao?
Mamaly an'i Un_moko
bangbang dia hoy izy:
Ho an'ireo mpanana vola tsy toa ahy: tsy azoko hoe aiza no hametrahana ny fisie tsirairay, izany hoe csc, modem, sns. ary satria ny rakitra dia tsy misy azy ireo akory, manana fisie .tar fotsiny izay tsy maintsy apetraka toy ny hoe teo amin'ny PDA daholo izy ireo, atombohy ary dia izay. Manantena aho fa hanampy olona izany, satria vitsy ny mahomby izay manohana ireo izay misalasala. 🙂
Mamaly an'i Jobangbang
Saingy inona no lazainao amiko, ny lesona dia an-tsipiriany tsikelikely ary ao anatin'ny rakitra voafintina dia ao daholo ireo rakitra nofaritako tao amin'ilay lesona.
Tamin'ny 10/08/2012 23:06 PM, «Disqus» nanoratra:
Salama aho manana galayx s i9000 2.3.6 avy amin'ny Movistar ary tiako ho fantatra raha toa ka afaka mametraka mivantana ny kernel JVU root-root ao aminy aho ary raha manohana ny kinova baseband I9000BGJV2, Kernel kinova 2.6.35.7-I9000BGJV6-CL783990 faka @ DELL132 # 2 sa tsy maintsy apetrako aloha ny firmware 2.3.6 JVU?
Valiny tamin'i Joseman160
Tsara ny tolakandro mila fanampiana aho…. Nanaraka ny dingana rehetra amin'ilay taratasy aho, ary ny telefaoniko dia mifandray amin'ny odin, ny varavarankely mahitsizoro dia miseho miloko mavo miaraka amina isa eo akaikiny, tsindrio ny bokotra kintana ary manomboka ny fizotrany, saingy mandroso fotsiny izany raha 2 % na eo amin'ny odin na amin'ny telefaona ... eo ambonin'ny varavarankely mavo kely eo amin'ny kianja lehibe no misy ny taratasy FACTORYFS ,,, aorian'ny 15 minitra tsy misy fandrosoana intsony ... inona no vahaolana amin'ny olako ??? ? MISAOTRA MIALOHA …. MIANDRY FANAMPIANAO….
CODE_I9000XXJVU_CL851880_REV03_user_low_ship.tar.md5 dia mitombina.
MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5 dia mitombina.
Inona no olana?? : S
Sintomy ny kinova taloha an'ny odin
Rod dia hoy izy:
Nanampy anao ve ny kinova ODIN teo aloha? Toy izany koa no mahazo ahy ary tsy hitako izay hatao? ahoana no namahanao azy?
Valiny tamin'i Rod
Tohizo indray ny fizotrany, mitandrema tsara amin'ny toerana hametrahanao ireo rakitra. Ary manisy marika ny repartition aloha ary avy eo rehefa mametraka ny marika amin'ny marika
Vita ny kofehy rehetra. (nahomby 0 / tsy nahomby 0)
Tapitra sahady ve ??? okay? .. lazao amiko rehefa afaka ianao
Pak dia hoy izy:
Nohavaozina tanteraka !!! tsisy olana.
Misaotra betsaka fa kintana vitsivitsy ianao !!
Mamaly an'i Pak
Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny info sy ny asan'ny fanoratana amin'ny serivera izay mbola manan-kery. Holazaiko aminao, nanandrana nanao an'io zavatra io tamin'ny findaiko aho tokony ho tamin'ny 5 ora lasa izay, maty aho, nanao korontana, velona indray aho ... maty aho niaraka tamin'ity, tsikelikely aho namerina ... raha ny tena izy dia lasa zombie izy ... tena mavesatra dia haingana, toa tsy misy dikany satria tsy mivoaka ny efijery fanombohan'ny mpamatsy ary milaza I900 fa haingana be dia be… ny olana? Ny efijery mikasika dia tsy mandeha ho ahy T_T tsy mahafantatra ny rantsan-tànako fa ny bokotra izay tsy manamboatra azy io dia tsy milaza ny 8 square, ampidiro kitendry sim check, sns)
vvvv dia hoy izy:
Tsy nahatakatra na inona na inona aho raha misy fomba mora kokoa hitenenana ahy azafady; _ (
Mamaly ny vvvv
Palamago dia hoy izy:
Ry namako, azonao atao ve ny milaza amiko ny atao hoe pass.
Raha vantany vao vita ny dingana rehetra dia manontany ahy izy hoe "hamafiso ny teny miafiko".
Afaka manampy ahy ve ianao, misaotra
Mamaly an'i Palamago
Tsy mangataka pass izany, efa voahidy ny telefaoninao?
Joc Mena dia hoy izy:
Niasa lavorary ho ahy aho, milamina ny zava-drehetra, misaotra tamin'ity lahatsoratra ity
Valiny tamin'i Joc Mena
HAZO dia hoy izy:
Mitandrema, mitandrema amin'ny fomba ahafahanao miditra amin'ireo fitaovana lerus 500 toy ny sambung galaxy 3, tsy tonga amiko akory izany
Valiny amin'ny hazo
Salama, tsara be daholo ny zava-drehetra, mahafinaritra be ny telefaona saingy tsy mandray ilay 3g, efa namboariko avy tao amin'ny apn ary novaiko ho an'ny an'ny orinasako ny tarika data, hevitra vitsivitsy momba ny fomba hanaovana ny fiverenan'ny 3G
Ampandehano ny maody fanamoriana ary avereno aloha ilay izy, miaraka amin'izany dia tokony hahazo famantarana ianao.
Zyx999 dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ny lesona, niasa tonga lafatra ho ahy izy io. Tamin'ny voalohany dia nanandrana nametraka mivantana ny CFroot aho satria efa nanana 2.3.6 ary maty ny findaiko ... Natahotra ahy i XD fa natomboka hatrany am-boalohany ny fampianarana ary tsy namelona ahy fotsiny ny telefaona fa efa miorim-paka aho, misaotra tena betsaka ianao 🙂
Mamaly an'i Zyx999
Aiza ny fisie CF Root nakariko ilay programa izay nolazaiko fa nametahana ny CF Root ary tsy nahazo fanampiana aho azafady… ¿?
Jereo ny faran'ny lahatsoratra, misy rohy ho an'ny programa sy rakitra rehetra ilaina, ary mandritra ny lesona dia ao koa izy ireo amin'ny fotoana maromaro. Manoro hevitra anao aho mba hamaky ny teny torolalana isan-teny fa hazavaina tsara ny zava-drehetra ary tsy azonao atao ny manodina azy toa ny nataoko tany am-piandohana 🙂
Duduaustin Tv dia hoy izy:
Salama hoy aho fa manafoana ny cellule-ko ary IZAO TSY MIVADIKA AAAAAAAAAAAAAAAAH AZO ATAO IZAY HATAO
Valio Duduaustin Tv
ao anaty fampirimana inona no misy ny Root CF… ¿?
Rapidexe dia hoy izy:
Nitranga tamiko izany raha ny filazan'izy ireo etsy ambany, mangataka ahy ihany koa izy hanamafy ny tenimiafiko, ary eny, nosakanako izany satria noheveriko fa nisy nangalatra ary nosakanan'ny orinasa ho an'ny imei izany, saingy nahita aho roa andro lasa izay ary Nandritra ny nanokafan'izy ireo azy dia nieritreritra ny hanavao azy aho saingy manontany ahy ny fandefasana, raha mandeha tsara ny zava-drehetra amin'ny alatsinainy na talata dia namoha azy aho hatramin'ny nilazan'izy ireo tamiko fa mila 72 ora ny famohana azy, azoko vonoina izany ary rehefa voahidy dia afaka mametraka ny faka faka sy ny ics aho? Misaotra mialoha, ankoatry ity olana ity dia lavorary daholo ny zavatra rehetra.
Valio amin'i Rapidexe
Andres-medina3550 dia hoy izy:
Ny PC-ko dia tsy manaiky ny fitaovana amin'ny maody fampidinana, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Andres-medina3550
Hamarino raha manokatra ny odin ianao dia mahazo ny teny COM arahin'isa amin'ny zoro ambony havia.
Tamin'ny 05/09/2012 04:51 PM, «Disqus» nanoratra:
Sisco670 dia hoy izy:
Inona no teny miafina manokatra rakitra voahidy?
Valiny amin'ny Sisco670
Rahely dia hoy izy:
Salama .. manana olana aho .. ao anaty rakitra hanafoanana ny zip dia tsy manana aho
ny kaody kaody an'ny firmware tsy misy zip
ny rakitra MODEM
ilay rakitra antsoina hoe CSC
azafady ilaiko maika izy ireo
tsy miseho ireo rehefa mamoaka zip
Mamaly an'i rakel
Avereno nidina indray ny zip
Tamin'ny 05/09/2012 19:39 PM, «Disqus» nanoratra:
amin'ny farany rehefa avy nisintona ny zip telo ary miaraka amina olana iray dia mitadiava pejy iray hafa ary afaka mamaha azy aho ... afaka nisintona ireo rakitra aho ary nanana ny finday tamin'ny semi-hidin-trano nefa efa voavaha izany ary miaraka amin'ny Rom MIUI Jelly Bean 2.8.24 avy amin'i muchopoli83 miasa tanteraka..misaotra betsaka anao mamaly sy misaotra nizara an'izany rehetra..manao asa tsara ianao ary mitazona hatrany ...
Misaotra anao namana noho ny fiderana anao sy ny fanohanananao ary ny fahatokisanao.
Tamin'ny 06/09/2012 22:54 PM, «Disqus» nanoratra:
Manana fanontaniana aho: azo atao ve ny manolo an'ity IMEI ity? Raha sendra voafafa ny folder EFS nataoko ary nosoloin'ny iray hafa, na zavatra toa izany
Tonga ny fanontaniako satria tsy nanao kopia efs aho (tsy nisy ny fahitana raha tsy efa nampahafantariko kely ny tenako) alohan'ny hanarahana ny tutorial, ary tonga lafatra izao ny finday fa manamarika ahy toy ny hoe mandeha mivezivezy aho, toa izany dia tsy ivelan'ny fireneko, ary tsikaritro tamin'ny kies fa ny orinasa napetrako izao dia miteny (KOR)
Mety ho very ve ny IMEI na zavatra toa izany ary manana generic iray aho?
misaotra mialoha, mbola tsy tena mahay aho amin'ireto raharaha ireto
Qrkalonso dia hoy izy:
Narahiko ny dingana rehetra napetrak'izy ireo ary rehefa tafiditra ao amin'ny ODIM3 aho rehefa vita ny teny PASS rehetra dia tsy mandeha ny finday dia voasakana.
Inona no azoko atao, tsy misy fomba hamelomana azy io
Mamaly an'i Qrkalonso
Youssef dia hoy izy:
ny findaiko dia samsung galaxy s ity volo ity, tsy avelany hataoko anarany hoe ossuari
Mamaly an'i Youssef
T_bitro84 dia hoy izy:
Misaotra betsaka ry dadatoa, tonga lafatra ho ahy izy io ary nohazavaina tsara ny zava-drehetra 😉 arahaba makina!
Mamaly an'i T_rabbit84
Pryrate dia hoy izy:
Tafahitsoka aho rehefa avy nampiasa Odin. Mipoitra ny zavatra "PASS", miverina ny finday ary manomboka mametaka zavatra, saingy tsiroaroa toy ny litera mena ireo milaza fa "tsy mahomby" amin'ny drive E: ary mijanona eo ... inona no mety hitranga?
Valiny amin'i Pryrates
Izany dia ny dingana sasany nataonao tsy nety, amin'ny dingana voalohany dia tsy maintsy misafidy fizarazarana indray ianao, ary amin'ny faharoa, ilay iray manana ny CFRoot tsy.
Tandremo koa ny fametrahana ny rakitra tsirairay amin'ny toerany.
Diana_rojas_unefa dia hoy izy:
Ity fametrahana ity dia rindrambaiko ofisialy amin'ity modely ity (GT-9000t) ????
Valio i Diana_rojas_unefa
Raha tahiry izany
Tamin'ny 11/09/2012 05:30 PM, «Disqus» nanoratra:
Toledolbus dia hoy izy:
Salama Francisco. Ny solo-tanako dia galaxy S.Ny tutorial no nataoko tamin'ilay taratasy ... na izany aza mila fotoana maharitra ny finday, mihoatra ny 5 minitra ary mijanona ao anaty gsm ... tsy mampifandray ahy amin'ny Internet izany.
Azafady azonao omena tanana aho.
Mamaly an'i Toledolbus
Salama hametraka ny zava-drehetra, fa ny olako dia ny mikasika ny efijery mikasika, miadana izy .. mamaly ny faharoa sy somary aorian'izay ataoko. Misy vahaolana ve?
Efa vitako ny dingana rehetra ary efa ananako ny SGS I9000 ary efa ananako izany amin'ny 2.3.6 miaraka amina faka napetraka.
Ny olana mahazo ahy dia isaky ny miantso na mahazo antso aho, amin'ny faran'ity dia mahazo an'ity lesoka ity aho: "Ny fizotran'ny com.andorid.phone dia tapaka tampoka. Andramo indray azafady" ary avy eo tsy manana fandrakofana ho an'ny segondra vitsy. Manome ahy olana ny Bluetooth ary sarotra be amiko ny mampifandray azy amin'ny fitaovana hafa.
Inona no azoko atao
Manaova famerenana orinasa raha hamaha anao izany
Tamin'ny 13/09/2012 22:54 PM, «Disqus» nanoratra:
Efa nanao famerenana amin'ny laoniny aho ary mbola mahazo an'ity lesoka ity ihany, manana olana amin'ny Bluetooth sy GPS aho rehefa mahita zanabolana ary mampifandray azy io very matetika ny signal.
Misy fanamboarana na zavatra hamahana an'io olana io?
Nuriams206 dia hoy izy:
Inona no mitranga raha tapaka ny finday? raha ny amiko dia ajanona mihantona amin'ny écran mainty no navelako kelikely ary tsy nisy ary notapahiko. izao tsy mandeha ny zavatra azoko atao?
Azafady mba valio satria talohan'ny nanoratako dia efa novakiako ny hevitra ary mihoatra ny iray. Efa nitranga izany saingy mbola tsy nahita valiny aho.
Valiny tamin'i Nuriams206
Miverena amin'ny maody fampidinana ary avereno ny dingana fa alao antoka fa manana ny mpamily napetraka ao amin'ny solosainao ianao
Tamin'ny 18/09/2012 13:05 PM, «Disqus» nanoratra:
lemorar dia hoy izy:
Ity fomba fiasa ity dia mety amin'ny Galaxy S I9000T?
Valiny tamin'i Lemorar
Tsia, tsy mandeha io.
Tamin'ny 20/09/2012 21:35 PM, «Disqus» nanoratra:
charlie dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny fanazavana. Iray amin'ireo tranonkala an-tserasera manazava mazava kokoa ny zavatra.
Ny hany zavatra azoko in-2 nahatafiditra ahy:
1. Rehefa mametraka ny firmware amin'ny odin dia tsy nahavita ilay asa. Tamin'ny farany, noho ny tahotra ny ratsy indrindra, dia nesoriko ny telefaona, ary nanandrana kinova iray hafa odin, araka ny nohazavainao tamin'ny hevitra iray. Tonga lafatra.
2. Ao amin'ny fametrahana root CF dia nanandrana nametraka ny fisie tsy misy zip amin'ny PDA izy, raha tsy izany.
Amin'ny farany, fahombiazana.
Mamaly an'i charli
trixher dia hoy izy:
Ry namako tena tsara, nanao ny zava-drehetra aho ary tonga lafatra izy io, izao dia manana fanidiana tarehy aho ary haingana ny sela MISAOTRA
Mamaly an'i Trixher
Yorch Jape dia hoy izy:
miarahaba fanontaniana iray izay azoko apetraka raha toa ka ao anaty maody fampidinana aho dia esory ny findainao, tsy mandeha mihitsy ny fizotrany, mijanona amin'ny ampahany sbl.bin izy io, efa elaela izy io ary tsy mandroso, inona no azoko atao manao ???
Mamaly an'i Yorch Jape
Andramo apetraka amin'ny mode download indray ary avereno
Tamin'ny 23/09/2012 08:46 PM, «Disqus» nanoratra:
Arturo Camejo dia hoy izy:
Salama, andro tsara toy izao na maraina maraina, namonjy ny aiko ianao fa izany no antony nampakaranao ny findaiko, noheveriko fa maty io, nisy olona te hampakatra ilay lahatsoratra mitovy aminao nefa tsy misy ny csc ary tena nanana izy ireo telefaona ratsy tiako ho fantatra hoe iza ireo rindranasa roa niseho tamiko rehefa nanao ny dingana farany toy ny avy amin'ny CFroot? Ary ahoana no fomba ahazoako ny findaiko haka 3G, tsy mahatratra ahy ny Internet, avy any Venezoelà aho ary manana nomerika
Valiny tamin'i Arturo Camejo
Ampidiro ny fifandraisana tsy misy tariby ary ampifanaraho ny apn, raha tsy fantatrao ny angona omen'ny orinasa anao anao
Tamin'ny 29/09/2012 11:09 PM, «Disqus» nanoratra:
Julian Steinburg dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha toa ka mandeha tsara ho an'ny Samsung Galaxy S Pus ity fampianarana ity. GT-I9001
Valiny tamin'i Julian Steinburg
Tsia tsy mandeha io
aza apetraka fa nataoko tamin'ny samsung galaxy gt-i9000 nataoko ary tsy mandeha izany !!!!
Alohan'ny fanavaozana azy dia novakiako ny hevitra ary ny ankamaroan'izy ireo dia niresaka momba ny bibikely. Noho izany dia soratako izao MISAOTRA ANAO noho ny fanazavany tsara hoe TENA IZA REHETRA, ary nohavaoziko tsy misy olana fa misy hatetika kely satria io no voalohany tamin'ity finday ity. Ho an'ireo izay misalasala, azo atokisana tokoa izy io ary raha manaraka ny torolàlana STEP-BY-STEP ianao dia mety tsara izany. Mamerina ny fisaorana anao.
wraram dia hoy izy:
Fandraisana anjara tena tsara Francisco, tanteraho ny fomba fiasa araka ny ilazanao azy sy lafatra. Misaotra betsaka anao amin'ny tutorial anao fa mora sy tsotra ary mahomby io.
Valiny amin'i Wraram
Gabriel_arg07 dia hoy izy:
Omeo vahaolana ry rahalahiko, tsy azonao vonoina toy izany ny findaiko!
Valiny tamin'i Gabriel_arg07
Tsy azonao ovaina ve ny anaran'ilay lahatsoratra milaza hoe maodely inona izy io?
PS: izao dia manana lanja taratasy 2000 Arzantina aho
Mamaly an'i emanuel
Ny telefaona finday, araka ny nolazainao, dia nopotehinao irery, raha mamaky ilay lahatsoratra ianao dia ho hitanao hoe iza no maodelin'ny terminal, fa mazava ho azy fa mila mamaky ny zava-drehetra ianao.
Mora tokoa ny manome tsiny ny hafa noho ny hadisoanao manokana. Rehefa avy nilaza an'izany aho ary mba hahitanao ny sitra-poko, raha lazainao amiko ny maodelin'ny terminal misy anao dia ho hitantsika izay azo atao.
Antonio Jimenez dia hoy izy:
Salama, misy mahalala ny fomba ahazoana ny rakitra Firmeware rehefa misintona azy dia mitovy amin'ny CFRoot, ary ny famoahana ny famoahana azy dia mamorona rakitra milaza fa zImage. iza no afaka manampy ahy?
Valiny tamin'i Antonio Jimenez
efa nahita vahaolana momba an'io ve ianao ??? Miezaka aho fa tsy haiko ny manamboatra azy.
Mitovy tanteraka amiko izany. Ny rakitra CFRoot sy ny Firmware dia mitovy. Raha misy olona afaka mampakatra ny Firmware marina na ny mpamorona ny lahatsoratra dia tiako izany.
Dav_gerrero dia hoy izy:
Miarahaba anao, manana olana aho, nanavao ny 2.3.6 tokony ho 4 volana lasa izay, noho izany dia mitsambikina amin'ny dingana mivantana amin'ny fametrahana ny CFROOT hametraka 4.1.4, ny olana dia ny mijanona eo amin'ny efijery an-trano, ilay milaza fa samsung i9000, mihodina, mamono, sns. Afaka manampy ahy ve ianao? Misaotra
Valio i Dav_gerrero
Mediblast dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, efa nanao ny dingana hametrahana ilay kinova xxjvu aho, ny root tsy afaka manao azy, ny bokotra telo no ataoko ary mivoaka amin'ny maody fanarenana 3 ary ahoana no hiverenako amin'ny maody fampidinana
Mamaly an'i Mediblast
Aldo_rg1995 dia hoy izy:
miasa amin'ny gt-i9000b
Mamaly an'i Aldo_rg1995
Tsy misy bandy, ho an'ny GT-I900 ihany ity.
jdramirez251985 dia hoy izy:
Miasa amin'ny 9000t ve ity firmware ity? toy ny faka?
Valiny tamin'i Jdramirez251985
Tsia, natao ho an'ny I9000 izany
Eriller dia hoy izy:
Salama, lahatsoratra tsara be !! Tena mety io !! Nataoko izany fa izao dia te-hitsahatra tsy ho faka intsony aho ary hamela ny telefaona toy ny tamin'ny Yoigo versi 2.3.3. ary raha azo atao ny manafoana ny kaontera ho an'ny SAT. AHOANA NO HATAOKO ???
Valiny tamin'i Eriller
Tsy mila an'izany ianao raha handefa azy any amin'ny SAT, raha averinao indray ilay kinova 2.3.6 JVU ary avy eo tsy ataonao ny ampahany CFRoot, dia ho vonona ny hanatitra azy amin'ny SAT.
Io kinova io dia azo havaozina tanteraka avy amin'i Kies.
Hamarino tsara fa manafoana lamba firakotra ny sdcard anatiny manontolo.
Ka ahoana no anaovako azy ... tahaka ny nataoko mba hametrahana ny kinova 2.3.6 fa tsy nanao ny CFRoot? Somary very aho ..
Tena marina, fa io kosa dia manadio ny fahatsiarovana anatiny an'ilay fitaovana
Maxy romero dia hoy izy:
Nametraka ny zava-drehetra aho araka izay voalaza ao amin'ny Paositra, ary tena mandeha amiko izy io, avy eo ataoko configur ireo APN raha ny filazan'ny mpandraharaha ahy ao an-toerana dia Orang Israel, ary nandeha tsara daholo ny zava-drehetra.
Misaotra betsaka, indrindra noho ny mazava nanazavana ny zava-drehetra, dia maneho fa nanokana fotoana ianao tamin'ny fanaovana azy.
Mamaly an'i Maxy Romero
Dartboard50 dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara, tonga lafatra ny zava-drehetra. Ankehitriny ahoana no hametrahako gilasy?
Valio amin'i Dardero50
Tadiavo ao amin'ny bilaogy ny Tsunami X2.5 izay Jelly Bean Android 4.1.2. Izy io no romana tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
silocomeknowledgeable dia hoy izy:
Misaotra betsaka. Tsy te-hanova ny findaiko aho satria vaovao ary efa ananako mandritra ny vanim-potoana hafa. Miarahaba anao !!!
Valiny amin'i silollegoasaberantes
Ampidiro amin'ny rom Tsunami X2.5 izy izao ary hampiasa izany amin'ny Android farany ianao miaraka amin'ny bika aman'endrika sy fampiasa avo lenta.
Vintana_29_94 dia hoy izy:
Tsy fantatro izay tsy nahomby fa rehefa nanao ny dingana rehetra aho dia manandrana mamadika telefaona ary hafatra maitso fotsiny no azoko (tsy nahomby ny "logo. Jpg ') inona no azoko atao hanamboarana azy
Terminal inona no anananao?
Aiza no ahazoako ny modem rakitra ary ny csc tsy hitako izy ireo.
johnjoelsm dia hoy izy:
Mamaly an'i Juanjoelsm
Iddo Jose Claros dia hoy izy:
eny ... manana zavatra angatahina aho ... Notanterahiko tanteraka ireo dingana eto, (ny findaiko dia Galaxy S i9000) ary rehefa mampifandray amin'ny Wi-Fi dia misy bibikely tsy dia fahita firy dia ny mamerina azy io indray. ny fifandraisana isaky ny fotoana ... izany hoe miala amin'ny wifi ary mifandray indray ... manelingelina izany satria indraindray misintona rindrambaiko aho ary manapaka ... tsy maintsy averiko indray ny fampidinana ... fa tsy na dia milaza amin'ny horonan-tsary YouTube na zavatra toy izany aza ... tiako ho fantatra hoe inona no mety? ... raha misy mahay mamaha azy ... mialoha, misaotra!
Valiny tamin'i Iddo José Claros
Albercruz dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny tutorial anao. Afaka namelombelona ny Vibrant aho taorian'ny biriky tsy nampoizina.
Valiny tamin'i Albercruz
Tsy azoko atao ny mampiditra ny fisie tsy misy zip an'ny CF Root (zImage), ao amin'ny faritra PDA, satria tsy hita izany na eo aza ny fisie.
Mila mametraka karazana fanitarana na zavatra hafa ianao.
Tena tsara! Nanao ny zava-drehetra aho ho toy ny tutorial ary efa namboariko ny i9000
vitin dia hoy izy:
Tsy misy fomba fampidinana ny firmware na ny CFroot amin'ny pejy 4shared, raha misy afaka manampy ahy …….
Mamaly an'i vitin
miasa ny root root ho an'ny gt-i9000b
ary nametraka ny zava-drehetra tao amin'ilay taratasy, rehefa nanomboka indray dia nanjary mainty ny écran, tsy mandeha intsony izao, manana galaxy s i9000 aho….
misy vahaolana ve? : /
Mamaly an'i Jason
Avereno ny fizotrany ary mitandrema mba hanao ny zavatra rehetra tsy misy hafa amin'ny tutorial, indrindra ny resaka repartition.
joseluissaizjimenez dia hoy izy:
FANTASTIC, misaotra betsaka anao, nametraka manaraka tsara ny torolalana, ary miasa sy tonga lafatra ny terminal.
Valiny tamin'i Joseluissaizjimenez
Mahagaga, tonga lafatra, nataoko tamin'ny voalohany ary nivadika ny zava-drehetra araka ny nolazainao, misaotra betsaka anao izahay noho ny fandraisanao anjara, manohy manao izany ianao, efa manana mpanaraka anao.
The-luqui2011 dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro dia nanana olana aho nanao izay nolazain'ny tutorial fa ny zava-mitranga dia manana modely tablet galaxy s yp-g70 aho ary rehefa vitako ny dingana fa tsy ny mamerina azy dia mijanona eo amin'ny efijery mainty misy ny logo samsung, afaka manampy ve ianao hamaha izany aho? Tena ho feno fankasitrahana aho
Valiny tamin'i El-luqui2011
Jereo, tsy maintsy manandrana indray ny zava-drehetra ianao ary amin'ity indray mitoraka ity dia avereno miverina 2.3.6 re ny partition ao odin ary miandrasa fotoana fohy dia aza esorina ny galaxy s anao mandra-pivoakany ny mode dowload ary manontany anao ny fiteny izy dia azonao esorina fotsiny
Xpressa-t dia hoy izy:
Salama, eo am-pametrahana aho fa efa maharitra 10 minitra ary mitohy ao amin'ny odin ilay zavatra sbl ary tsy mandroso ilay baiko farany milaza fa tsy mandroso ny sbl.bin pro ary nataoko daholo ny voalazan'ny manual fa manana aho voamarina ireo dingana ary izao ny telefaona dia galaxy samsung gt i9000t azonao atao ve ny manampy ahy na miteny km kitar ity ary afaka manohy amin'ny telefaonako mahazatra anao dia tiako ianao
Mamaly an'i Xpressa-t
Tsy natao ho an'ny GT-I9000T fa ho an'ny GT-I9000
Araka ny firmware an'ny zavatra novakiako dia tsy misy fiovana eo amin'ny maodelin'ny i9000t sy i9000 ary azo havaozina ny firmware. Ka eo no mahadiso ahy? Fantatrao ve hoe aiza no ahazoako ny firmware xk voalohany ary maty ny findaiko
dcordoba dia hoy izy:
Salama Francisco Ruiz… Nanaraka ny btal tutorial aho izay araka ny nilazalazanao azy saingy manana olana mitovy amin'ny xpressa t… tsy mihoatra ny sbl… ny ekipako dia GT I9000… Tena tiako raha afaka mitari-dalana ahy ianao vahaolana na safidy hafa… Misaotra mialoha…! !!
Mamaly an'i dcordoba
Etonet dia hoy izy:
Misaotra betsaka, narahina tamin'ilay taratasy ary tsy nisy olana, nilaza fa tamin'ny voalohany dia tsy nahomby i odin, fa tamin'ny farany dia azony ihany. Mamerina ny fisaorana anao.
Valiny tamin'i Etonet
Toy ny landy manaraka ny fampianarana. Nanana olana tamin'ny fanavaozana ny Rom Manager mivantana avy tany Froyo aho ary farafaharatsiny nahavita nampakatra tao amin'ny Gingerbread aho izao
norma i9000t dia hoy izy:
Ny fanontaniako dia i9000t mihatra satria rehefa manao ny fomba fanao aho dia mandroso kely fotsiny ny tsipika mavo ary avy eo misy ny sosokevitra sasany.
Valio i norman i9000t
Javier Alive dia hoy izy:
Salama Francisco, manana GT-I9000 aho, narahiko ny dingana, fa ny zavatra hafahafa voalohany hitako dia ny nampifandraisako voalohany ny telefaona tamin'ny PC tamin'ny fomba donwload, fa tsy 1 COM, nahazo COM 3 aho. Nanome fanombohana aho ary rehefa afaka 10 minitra mbola tsy nisy banga ny COM 0, ary ny COM1 sy ny COM2 dia nanome FAIL, ary eo izy ireo, inona no hataoko? Tsy sahiko ny manapaka ny telefaona amin'ny PC, miandry aho ny valinteninao
Valiny tamin'i Javier Vivo
Ireto ny andalana farany miseho eo am-baravarankely
Maotera Odin v.3 (ID: 15) ..
Maotera Odin v.3 (ID: 9) ..
Tokony apetrakao ny mpamily ary ampifandraiso amin'ny finday ny maody.
Tamin'ny 21/12/2012 01:28 PM, «Disqus» nanoratra:
Namaha azy aho, tamin'ny alàlan'ny odin .83 fa tsy ny .82, apetrako izao ilay jelly bean 4.1.1 rom, nampidina ny fisie tao anaty telefaona aho ary apetraka, saingy toa ela be izany, sa tsy izany? Manana ny gargoyle mandritra ny fotoana lava eo amin'ny efijery aho ...
juantxo23 dia hoy izy:
Niasa tanteraka tamiko ny zava-drehetra, misaotra betsaka!
Mamaly an'i juantxo23
miasa ho an'ny samsung GT-I9000b
picudu dia hoy izy:
Francisco: raha vantany vao miasa ny Nexus 4, dia naka ny Galaxy S aho ary sahy namaka azy…. miaraka amin'ny torolalanao TSY FAHAIZANA ary ao anatin'ny 15 minitra.
Misaotra betsaka anao nizara ny fahalalanao.
Ankehitriny te-hametraka kinova Ginger aho, raha azo atao 4.2.1 hampitahanao izany amin'ny Nexus .. ary azo antoka fa ho maharikoriko ahy ny nandanianao tsy ilaina ..
Misy tolo-kevitra momba ity dingana vaovao ity?
Mamaly an'i picudu
Araho ny tutorial hametrahana RemICS-JB V1.0
Tamin'ny 8 Janoary 2013 17:22 PM, Disqus nanoratra hoe:
napetraka ary miasa tsara.
Misaotra anao…. marina ny torolalana omenao.
Taorian'ny andrana andrana dia tsy nila nividy ny nexus4 mihitsy aho, saika mitovy ny vahindanitra …………… .. .. raha tonga any Oviedo ianao, omeo aho mikasika, manome trosa anao aho.
Misaotra namana hotadidiko ao an-tsaina izany
Tamin'ny 09/01/2013 18:55 PM, «Disqus» nanoratra:
Salama. Azonao lazaina amiko raha izao no zavatra tsara tokony hatao, satria tsy azoko ny pas. MISAOTRA
Fco.Javier dia hoy izy:
Salama Francisco, narahiko fotsiny ny lesona an-dàlana ary rehefa averiko indray ilay telefaona dia mangataka tenimiafina amiko aho, ahoana no hamahako an'io. MISAOTRA
Mamaly an'i Fco.Javier
Tami Esp Spread dia hoy izy:
Misaotra fa niverina fotsiny ny I9000 aho, manaraka ny toromarikao !!!
Mamaly an'i Tami Esp Spread
rob14 dia hoy izy:
Misaotra indrindra namana, miasa tsara daholo ny zavatra rehetra !!! Rehefa midina any Andalusia ianao dia manana fanasana. Famihinana
Valiny amin'ny robe14
Misaotra namana, fantatrao eto fa manana anay ianao raha misy fanontaniana.
tsara izany nataoko ihany koa tamin'ny taratasy ary ankehitriny tsy mahazo fandrakofana tambajotra vahaolana aho. ny terminal dia vodafon ary navoakan'i imei ity dia hisy hifandraisany amin'izany. Misaotra mialoha
Mila manamboatra ny APN miaraka amin'ny angon-drakitra orinasa ianao.
Ho hitanao izany ao anatin'ny fifandraisana sy tamba-jotra tsy misy tariby. Ny data dia azo jerena amin'ny Internet na amin'ny fiantsoana Vodafone.
Tamin'ny 12/02/2013 02:00 PM, «Disqus» nanoratra:
Salama, manana galaxy si 9000 aho ary manavao ny firmware firmware 2.3.6 Gingerbread, ny fanontaniako dia raha misy kinova tsaratsara kokoa ho an'ity telefaona ity
Mamaly an'i Fco. Javier
Serch martinez dia hoy izy:
henoy ny fanontaniana hoe ahoana no nanavaozanao azy araka ny voalaza eto?
ary jereo, hitako io lazain'izy ireo fa tsara indrindra io
Valiny tamin'i Serch Martinez
Ny bara manga amin'ny maody fampidinana dia tsy miova, maharitra ela ve? Manampy ahy tsy haiko raha hanapaka azy io sy hanandrana azy amin'ny solosaina hafa na inona no hatao, nataoko daholo ilay taratasy.
Manme Malaga dia hoy izy:
Misaotra anao!! Nahazo ny findaiko izay nanamaivana izany
Mamaly an'i Manme Málaga
mijanona ao amin'ny namana sbl.bin i olle ary tsy hitako izay hatao raha valio
Tsy maintsy misaotra betsaka anao aho noho ity lahatsoratra ity satria ianao namonjy ny vahindanitra ahy tsy ho biriky hatramin'ny nanandramako nanongotra azy tamin'ny lafiny iray hafa ary namerina ahy foana io ary ankehitriny dia toy ny vaovao.
Misaotra betsaka amin'ny fiaraha-miasa eto amin'ity pejy ity
Bla dia hoy izy:
Manana ny i9000b samsung aho, fantatrao raha toa ka mandeha koa izany? Tsy dia misy fitaovana firy amin'ity Celu ity… Misaotra !!! manampy daholo ny zava-drehetra !!!!
Valiny tamin'i Blas
Nanaraka ny dingana arakaraka ny paositra aho fa rehefa averiko indray ny telefaoniko dia mijanona eo amin'ny efijery fanovana keyboard eo amin'ny efijery izay mangataka ahy hikitika ny sahan-dahatsoratra ary tsy hiala eo izany, toa tsy niasa intsony ny efijery satria na ahoana na ahoana Tsy ekeko ny fikasihan-tsarimihetsika ...
Inona ny maodelin'ny terminal anao?
Io no maodelin'ny GT-I9000B
Tsy avelako hanao zavatra eo amin'ny efijery aho ary hisy bokotra manaraka hiseho izay tsy azoko tsindriana satria tsy mamaly ilay efijery ...
Inona no soso-kevitrao fa ataoko?
Mandehana any sammobile.com ary sintomy ny rindrambaiko mifandraika amin'ny maodelin'ny terminal anao satria ity tutorial ity dia ho an'ny GT-I9000.
Ok Francisco, misaotra betsaka…. Misintona rindrambaiko mifandraika amin'ny tranonkala aho.
Misaotra anao namanao matoky anay
Ivan E. dia hoy izy:
Salama Carlos, azonao atao ve ny manamboatra ny écran amin'ny fipetrahana keyboard eo amin'ny efijery ??? Manana maodely mitovy 9000b aho ary nijanona tamin'io safidy io ... Sa efa nanao zavatra hafa ianao ??? Misaotra tamin'ny valiny.
Valiny tamin'i Ivan E.
Ity entana ity dia ho an'ny i9000 fa tsy i9000B
Tamin'ny 04/04/2013 04:49 PM, «Disqus» nanoratra:
Salama, novakiako tamin'ny telefaona izany rehetra izany ary nangataka ahy tenimiafina izay tsy haiko akory hoe inona, raha voasakana ny telefaona dia vahaolana vitsivitsy
amboadia dia hoy izy:
Ary ataoko izay rehetra lazainy ary izao ny finday mangataka kaody ho vahaolana
Io no kaody SIM, sa tsy izany?
Izaho dia nesorina ny sim ary exo ny dingana rehetra araka ny ilazanao azy ary hamafisiko ny teny miafinao
Mametraka indray azafady
Nicolas A. Ferreyra dia hoy izy:
Napetrako tsara daholo ny zava-drehetra, tsy manana pad hanoratra aho na inona, afaka manampy ahy ve ny olona?
Valiny tamin'i Nicolás A. Ferreyra
Inona ny maodely manokana amin'ny telefaoninao?
Tamin'ny 04/04/2013 01:03 PM, «Disqus» nanoratra:
Galaxy S GT-I9000 io, niasa ho ahy ny zava-drehetra afa-tsy ny efijery
ditin-kazo manitra dia hoy izy:
Salama!! Tsy azoko atao ny manana ilay Roteado vaovao, ilay fanamboarana novaina. Manana ny Galaxy S amin'ny Android 2.3.6 aho ary nampidina ny rakitra CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS ary manaraka ny dingana nolazainao aho, toa marina daholo, fa rehefa manandrana mamadika ny finday aho mahazo ilay efijery telozoro mitovy ihany fa tsy ny menio miaraka amin'ireo safidy tokony hivoaka. Inona no tsy mety ataoko ???
Manantena aho fa misy afaka manampy ahy. Misaotra
Mamaly an'i oliban
Ataovy feno ny anao dia tsy hanana olana ianao. Ambonin'izany rehetra izany dia mariho fa amin'ny tapany farany dia tsy nasiana marika miverina.
Tamin'ny 06/04/2013 22:07 PM, «Disqus» nanoratra:
Salama aho nanao ny zava-drehetra toy ny ao amin'ny lesona fa tsy mametraka ny CF-Root dia tsy te-hametraka azy aho satria manana ny findaiko miorim-paka. fa rehefa vita ny fizotrany dia handeha hiverina indray ny telefaona dia mangataka kaody aho ary tsy avelako hanao na inona na inona .. mila fanampiana aho amin'ny faa !!!
Modely inona io?
Tamin'ny 12 aprily 2013 19:26 hariva dia nanoratra i Disqus:
ny galaxy s i9000
Misaotra betsaka!! Nosakanako imei ny telefaona ary tsy afaka niantso na tsy nahazo antso na zavatra hafa mihitsy aho. Tsy mampino. Ny fanavaozana ny telefaona amin'ny alàlan'i odin sy ny fametrahana ny faka faka fotsiny dia nanokatra ahy ary toa vaovao izany! Misaotra indrindra anao !! 🙂
leandro_perdomo dia hoy izy:
Salama, novakiako daholo ny tutorial ary nataoko tsara ny zava-drehetra, fa rehefa hatao ny fanombohana dia mangataka tenimiafina amiko izy fa tsy hoe
Mamaly an'i leandro_perdomo
Tsy mbola nisy toy izany tamiko ary efa namoaka Galaxy S. be dia be aho.
Toy izany koa no nanjo ahy .. inona no namboarina?
Nampidiriko ny rakitra rehetra araka izay nolazainao fa mijanona ao amin'ny safidy ...
ary maharitra 1/2 ora amin'ity fomba ataoko ity! 🙁 ampio plss….
MISAOTRA ANAO ! ! !
Ovao ny usb output, indraindray misy ny olana
Zito Moreno dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko, manova ny terminal ary na ny pc aza, fa inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Zito Moreno
mifanaraka amin'ny galaxy s i9003l ve izy io? Efa misintona ny programa aho hanombohana !! tena matahotra
Aza mieritreritra ny hanandrana azy namana akory fa mety hampiditra ny terminal
Tamin'ny 21/04/2013 18:49 PM, «Disqus» nanoratra:
Tony oropeza dia hoy izy:
Salama, tolak'andro tsara, ny zavatra voalohany tiako hambara dia ny fisaorana lehibe indrindra an'ity mpanoratra ity, avy amin'ny maha teknisiana Blackberry fitaovana ahy ary ho ahy dia intuitive foana ny nanao an'ity karazana fanavaozana ity, na izany aza ny tsena Venezoeliana efa niova ho IPhone sy Samsung noho izany dia mila manitatra ny faravodilaniko aho ary izany no antony nitadiavako fampianarana izay hampianatra ahy bebe kokoa na tsia hanao fanavaozana toy ny hoe nohazavaina tamin'ny zaza izany, azoko ity fampianarana ity manaraka ny torolàlana tsikelikely ary mazava ho azy fa manamarina ny maodelin'ny GT-I9000 izay voafaritra mazava tsara amin'ny fiandohan'ity lesona ity ary tonga lafatra amiko, izay tiako hisaorana ny mpampianatra indray noho ny fanazavany mazava sy amin'ny antsipiriany. Izy io dia niasa ho toy ny manintona ahy mba hahatakarako tsara ny fanavaozana ny fampiharana tsirairay. Salu2 ianao dia efa voafantina ao amin'ny tiako indrindra espro manohy mandefa.
Valiny tamin'i Tony Oropeza
Baltxa dia hoy izy:
Salama, voalohany indrindra dia misaotra anao rehetra miasa fatratra amin'ny zavatra rehetra mba hahafahantsika mankafy azy ireo avy eo.
Te-hanavao ny kinova android an'ny i9000 aho fa alohan'ny hanarahana ny dingana tiako ho fantatra raha afaka manao izany amin'ny kinova 2.2 froyo.xwJPF sa tokony hiova kinova hafa aho avy eo manaraka ny dingana voalaza eto? Avy amin'i Yoigo ilay finday ary tsy nikasika na inona na inona hipoaka na hamaka aho
Mamaly an'i Baltxa
Alberto Solis dia hoy izy:
Salama, ahoana no ahafahako manavao ny galaxy s tsy mametraka ny custom Kernel amin'ny Root sy ny ClockWorkmod Recovery ary mety amiko izany na tsy maintsy apetraka dia miandry valiny aho misaotra
Mamaly an'i alberto solis
Juan Carlos Lara dia hoy izy:
Azafady, mila ny fanampianao aho. Taomy amin'ny taratasy ilay zava-drehetra ary rehefa manomboka mandeha ny telefaona dia mandeha avokoa ny zava-drehetra afa-tsy ny efijery, tsy afaka omeko manaraka. Ratsy ny findaiko? Io modely io ihany, azafady, mila fanampiana aho.
Valiny tamin'i Juan Carlos Lara
Manana fisalasalana aho, azo atao ve izany amin'ny i9000B?
eo ny odin mijanona mikatona ary tsy manana abansa aho, inona no azoko atao?
dassad dia hoy izy:
Salama Francisco, vitako ny voalaza ao amin'ity lesona ity ary nandeha tsara ny zava-drehetra, afa-tsy ny fahaverezako ny fifandraisana amin'ny fandaharam-potoana, amin'ny tsy fanondroana amin'ny fotoana rehetra tokony hanaovan'ny kopian'ny mpifandray alohan'ny handehanany. Mety ho tsara raha ampidirinao ity famantarana ity ho an'ny olona manaraka izay sahy manao izany.
Na izany na tsy izany, misy fomba hamerenana ny fifandraisana amiko ve?
Mamaly an'i dassad
rehefa manomboka indray dia miteny amiko
Afaka manome fanampiana maika anao aho azafady
Ahoana no fomba hahitako ny tambajotra data ????
Salama Francisco, manaraka anao foana aho. Mitranga amiko fa manana olana aho, miankina amiko amin'ny fomba voalohany nataoko in-15 mahery izany ary tsy mety amiko, inona no azoko atao, tena kivy aho satria tsy mandeha io izaho, azafady mba ampio na olona izay mamindra fo amiko ary izaho manampy.
Ity dingana ity dia maharitra 51 minitra, te hitifitra ahy amin'ny baolina izy
Carlos Alberto Esis dia hoy izy:
Ampio, lasa mainty ny telefaona, tsy manomboka izy na miditra amin'ny dowloader na fomba fanarenana, tsy mandray ny charger izy io.
Valiny tamin'i Carlos Alberto Esis
dadatoa ed dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara, rahalahy, namonjy ny telefaonan'ny rahalahiko ianao haha
Mamaly an'i dadatoa ed
Adassa dia hoy izy:
Francisco, tolak'andro tsara, notanterahiko ny dingana rehetra, nomeko kintana ary tao anatin'ny 2 min dia nivoaka ny FAIL! amin'ny odin. Niezaka ny nanao azy indray aho ary hita tao amin'ny finday fa tapaka ny telefaona sy ny solosaina. Inona no azoko atao ??
Valiny tamin'i Adassa
zavatra mitovy amiko no nanjo ahy
Misaotra betsaka fa nanavao azy tsara aho, nanazava tsara ny torolalana, misaotra
CAREMIERDA dia hoy izy:
Misaotra an'i EXELENTEEE i MILLL …… Niasa tamin'ny fahatanterahana aho
Valiny amin'i CAREMIERDA
kal-bert dia hoy izy:
Tsy milaza na aiza na aiza fa ho an'ny 9003. Raha tsy namaky tsara ianao dia aza manome tsiny ny hafa.
Mamaly an'i kal-bert
Renan dia hoy izy:
salama namana, eu tenho galaxy s i9000b as faço hapetraka ??
Mamaly an'i renan
Mark Anderson dia hoy izy:
Salama ry zalahy, manavao ny firmware an'ny samsung galaxy y young aho, mino fa miaraka amin'ity dingana ity dia hahatratra azy aho, ary noho ny antony X, saika nahavita ny fanavaozana azy dia nivadika tampoka aho, inona no azoko atao amin'izany tsy mandeha? : S
Valiny tamin'i Marcos Anderson
Fanontaniana iray, faka-faka iza no tokony hampiasako mba hialana galaxy gt i9000 amin'ny android 2.2 froyo.xwjpf? ary indrindra aiza no hahitako ilay rakitra?
Ary ho an'ilay maodely mitovy nefa amin'ny android 2.3.6 miaraka amin'ny gingerbread.xwjw9?
Carlos Seville dia hoy izy:
Misaotra betsaka, efa narahako ny dingana rehetra ary tsy nanana olana aho. Fanontaniana iray, ankehitriny dia azoko atao ny mametraka sy manala ny feo alohan'ny nidirako haingana hifandray amin'ny internet ... azo ovaina ve izany? somary mavesatra ny fidirana tambajotra hampavitrika azy ireo isaky ny mandeha.
Mamaly an'i carlos sevilla
Salama, manana rindrambaiko kinova 2.3.6 napetraka aho, ilaina ny manao ireo dingana rehetra voalaza, na avy amin'ny root CF ???
Manomboka amin'ny CFRoot dia manana ampy ianao.
xD dia hoy izy:
Hey namana, manana galaxy pocket gt-s5301l android ics aho ary nanontany tena aho raha toa ka mitovy ny fomba fametrahana ny firmware amin'ny findaiko, mitovy ve sa tsia amin'ny ampahany fametrahana firmware?
Valio i gastonxD
roberrt dia hoy izy:
ny selular-ko tsy te-hahandro
Mamaly an'i roberrt
eau de Javel dia hoy izy:
Ny zava-drehetra dia niasa lavorary manaraka ny dingana.
Miarahaba anao ary misaotra !.
Valio ny Blead
Markitos Lopez sary placeholder dia hoy izy:
Tiako ianao hanao lahatsoratra amin'ny GT-i9000b… Misaotra
Mamaly an'i Markitos Lopez
Rhider rixter dia hoy izy:
Misaotra Francisco Ruiz, amin'ireto dingana ireto dia azonao atao ny mamelona indray ny Galaxy S I9000, ny faka izay ataoko amin'ny fomba hafa miaraka amin'ny programa sinoa dia haingana sy azo antoka. Misaotra hatrany avy any Peroa.
Mamaly an'i Rhider Rixter
Abigaila dia hoy izy:
Nataoko ny dingana ary tsy azoko atao ny mamadika ny galaxy s I9000B, misy vahaolana ve? Tsy afaka miditra amin'ny maody fanarenana aho fa rehefa misintona ……
Mamaly an'i abigail
Antonio Fernandez dia hoy izy:
Salama maraina Francisco. Nahavita ny dingana tsirairay aho tamin'izay notondroinao. Raha efa OK. Manome andiana hadisoana maromaro (manana sary aho fa tsy haiko ny mandefa azy) ary ny finday dia mirehitra sy mijanona tsy tapaka ao amin'ny sary famantarana GALAXY S. Indraindray dia mandeha tsara ilay izy rehefa ela. ny fomba famahana ny ignition sy ny lesoka.
Valiny tamin'i Antonio Fernández
Salama, ahoana na dia efa antitra aza ny hafatrao, dia mbola ilaina ihany, ampio izahay amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo rakitra amin'ny mega na mpizara maharitra sasany. fiarahabana
Stephanie Goncalves dia hoy izy:
Salama! Mila fanampiana aho. Azafady fa manelingelina anao aho fa mety afaka manampy ahy ianao. Ny findaiko dia galaxy S GT-I9000 samsgung, te-hanafaka azy hampiasa azy amin'ny karatra SIM iray hafa avy amin'ny orinasan-telefaona hafa aho, niroso tamin'ny fakana azy io voalohany aho, narahiko ny dingana ato amin'ity lesona ity: http://androidadvices.com/how-to-root-galaxy-s-on-android-2-3-4-xxjvp-firmware/3/ satria nifarana tamin'ny XXJVP ny isa fanorenako (tsy tadidiko ny ambiny, adaladala tsy hanoratako azy). Ny fampiasana ny rakitra CF-Root-XX_JVP_AAD_RFS.tar ao amin'ny ODIN PDA dia milamina ny zava-drehetra fa azoko ny hafatra FAIL 🙁 Niezaka indray aho ary nivoaka indray ny FAIL, ankehitriny ny telefaona dia biriky misy kisary telo: pc iray telozoro misy fiantsoana famantarana marika sy telefaona. Ampidiro tsara ny fomba fampidinana. fa tsy lasa any ankoatr'izay. ny ataoko? Te hanandrana ireo dingana ao amin'ny tutorial-nao aho handefasana azy io ary hamerina azy io saingy matahotra be aho. Mihevitra ve ianao fa handeha io? Tsy fantatro izay stock firmware hampiasako, efa namaky betsaka aho fa tsy azoko, matahotra aho sao ho very tanteraka ny telefaona finday rehefa diso ny famoahana azy.
Manantena aho fa afaka manampy ahy azafady. Tena feno fankasitrahana aho. Avy any Venezoelà aho ary tsy afaka mampiasa dolara, io no findaiko sy telefaona tokana misy vidiny 10 avo heny noho ny karama farany ambany 🙁
misaotra betsaka tamin'ny fotoananao namaky ity
Valiny tamin'i Estefany Goncalves
Ny samsung galaxy core i8260l-ko dia tsy mandray ny wiffi, tsy misy, hoy izy ireo tamiko fa mila misintona ny fanarenana aho, odin sy i8260lubamg3, inona izao no hataoko ????? mba ampio
Doraka dia hoy izy:
Efa nahatratra an'io aho tamin'ny voalohany !! Ny rakitra root root dia tsy vakiana raha ampidirinao mivantana ilay sary, dia tsy maintsy ampidinao ilay rakitra .rar (jereo ny sary mifamatotra amin'ny triatra misy anay! 😉)
Misaotra betsaka anao milina !!
Valiny tamin'i Doraka
Anjely Crs dia hoy izy:
Salama ahoana ny zavatra! ps tsara ny zava-drehetra mandra-pijanoko tao amin'ny maody fampidinana, ps eny! rehefa mandrehitra ny telefaona aho… .nahafantatra azy iodin fa rehefa ampifandraisiko amin'ny fomba fampidinana dia milaza amiko izy fa tsy eken'ny windows izany ary tsy mandeha tsara ny iray amin'ireo fitaovana USB. Misy sosokevitra ve?
Valiny tamin'i Angel Crs
AZA WALKAAAAAAAAAAAA dia hoy izy:
Banga iray nataoko ny zava-drehetra ary tsy nandalo mihitsy aho. Ahodino izao ny Firmware an'ny Samsung i9000! Tsy misy ilana azy ity ary nataoko daholo ny zava-drehetra!
Valio amin'ny TSY ANDAAAAAAAAAAAA
Misy fomba hanaovana azy amin'ny linux, ao am-baravarankely tsy azoko atao ny mametraka odin ary tsy mahafantatra ahy ny findaiko rehefa mampifandray azy amin'ny fomba fitehirizana be
Valiny amin'ny peteer
super voanio dia hoy izy:
TSY MBOLA ATAON'NY ODIN PDA SECTION NY FAFAR RAR. Vahaolana ve?
Mamaly an'i supercoco
Mario velasquez dia hoy izy:
Ry tompokolahy, inona ny vahaolana rehefa tsy mamaly ireo fitambarana fototra ireo fitaovana I9000, na hiditra amin'ny fomba fampidinana na amin'ny fomba famerenana mafy? ... Tena efa nandramako daholo ny fomba hitako tamin'ny internet fa ny mandeha amin'ny maody mahazatra foana ny fitaovana…. Misaotra mialoha amin'ny valinteninao. Miarahaba.
Valiny tamin'i Mario Velasquez
Hey namana fanampiana apetrako ny fisie toy izao ary omeko azy ny fiandohana ary tsy mandroso avy eo
Jefferson dia hoy izy:
Misaotra anao. Manavao ny Samsung Galaxy i9000t izay nanana Android 2.1, azonao atao ny manavao azy amin'ny 2.3.6, miaraka amin'ireo fomba fiasa ireo. Aza adino ny i9000 sy i9000t dia mifanaraka amin'ny roms-ny. Fa tsy ho an'ny modely hafa. fiarahabana
Valiny tamin'i Yefferson
Crisdrian dia hoy izy:
Nataoko tsara daholo ny zava-drehetra fa rehefa manomboka dia mangataka tenimiafina amiko
Valiny tamin'i Crisdrian
Lina roza dia hoy izy:
Ma kuan, kuidas suhted on meie elus olulised ja kui palju me tahame olla õnnelikud armastatud inimesega, mõnikord pou see lihtne. Me kõik näeme vaeva oma armuelu parandamisega ja oleme lihtsalt õnnelikud.
E-post: (info @ spelloflife.org)
või Külasta: www.speloflife. org
Valiny tamin'i Lina Roza